Julaay 2021: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah | Laga soo bilaabo Linux
Julaay 2021: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah
Maalintan qalinka leh ee July 2021, sida caadiga ah bil kasta dhammaadkeeda, waxaan kuugu soo qaadanaynaa wax yar compendium, qaar ka mid ah kuwa ugu badan daabacyo daabacan muddadaas.
Si ay dib u eegi karaan (u arkaan, u akhriyaan una wadaagaan) qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan uguna habboon macluumaadka, wararka, casharrada, buugaagta, tilmaamaha iyo sii deynta, labadeenaba iyo ilo kale oo lagu kalsoonaan karo, sida webka DistroWatch, ka Aasaaska Barnaamijka Bilaashka ah (FSF), ka Hindisaha Isha Furan (OSI) iyo Aasaaska Linux (LF).
Iyada oo tan ururinta bil kasta, waxaan rajaynaynaa sidii caadiga ahayd, waxay si fudud ula socon karaan taariikhda berrinka Software Bilaash ah, Isha Furan iyo GNU / Linux, iyo meelaha kale ee laxiriira wararka tikniyoolajiyadda.
1 Soo Koobid Julaay 2021
1.1.3 Xiiso leh
1.1.4 Top 10 Lagu Taliyay posts ee July 2021
1.2.1 Julaay 2021 Soosaarida GNU / Linux Distros Sida uu sheegayo DistroWatch
1.2.2 Wararkii ugu Dambeeyay ee Hay'adda Bilaashka ah ee Software-ka (FSF)
1.2.3 Wararkii ugu dambeeyay ee Hindisaha Isha Furan (OSI)
1.2.4 Wararkii ugu dambeeyay ee Linux Foundation Organization (FL)
Soo Koobid July 2021
Kala-bixiyaha: Ciyaaryahan warbaahinta GNOME ah oo leh GUI jawaab celin ah
Iibsigii Audacity kadib, barnaamijku wuxuu hadda ogolaanayaa xog aruurinta si ay uga faa'iideystaan ​​mas'uuliyiinta dowladda
Dhibcaha Amniga: Waa maxay iyo waxa ku cusub nuuca cusub ee 2.0?
Oramfs, oo ah nidaam faylal farsameed si buuxda loo duubay
Top 10 qoraallada lagula taliyay ka July 2021
EDuke32: Sidee loo rakibaa loona ciyaaraa Duke Nukem 3D oo ku yaal GNU / Linux? (Ver)
Deepin wuxuu raacayaa talaabooyinka Windows 11 iyo barnaamijyada Android lagu rakibi karo iyada oo loo marayo Dukaankiisa. (Ver)
Jilicsanaanta KVM waxay u oggolaaneysaa fulinta koodh ka baxsan nidaamka martida ee ku shaqeeya AMD. (Ver)
Agaasimaha IT: Farshaxanka maaraynta Qeybta Teknolojiyada iyo Nidaamka. (Ver)
GitHub Copilot, caawiye sirdoon macmal ah oo loogu talagalay qorista nambarka. (Ver)
Photocall TV, waa ikhtiyaar xiiso leh oo laga daawan karo DTT meel kasta. (Ver)
CBL-Mariner, qeybinta Linux ee Microsoft wuxuu gaarayaa nooca 1.0. (Ver)
Bidix iyo Hexen: Sidee Loogu Ciyaaraa Ciyaaraha "Dugsigii Hore" ee GNU / Linux? (Ver)
Steam Deck, Qalabka loo yaqaan 'Valve's console' si uu ula tartamo Wareejinta. (Ver)
Musique: Cusbooneysiiyay iyo muusigga muusikada ee GNU / Linux. (Daawo)
Julaay 2021 Soosaarida GNU / Linux Distros Sida uu sheegayo DistroWatch
Wareegga 21.2.0: 2021-07-28
GParted Live Live 1.3.1-1: 2021-07-23
Kaysen Linux 1.7: 2021-07-23
Dabo 4.20: 2021-07-13
8.3 Euro: 2021-07-13
Xuddunta 5.0 RC3: 2021-07-08
Proxmox 7.0 "Deegaanka Virtual": 2021-07-06
Si aad wax badan uga ogaato mid kasta oo ka mid ah sii-deyntan iyo in ka badan, dhagsii waxyaabaha soo socda isku xirka.
Wararkii ugu Dambeeyay ee Hay'adda Bilaashka ah ee Software-ka (FSF)
01-07-2021 - FSF waxay qaadaysaa tallaabada xigta ee ay ka go’an tahay inay hagaajiso maamulka guddiga: Sidii ugu horeysey ee loo shaaciyey bishii Abriil, guddiga sanduuqa bilaashka ah ee softiweerka (FSF) wuxuu waday ficillo taxane ah si loo xoojiyo loona casriyeeyo qaab dhismeedka iyo hannaanka maamul ee aasaaska. Ujeeddada dadaalladan ayaa ah in si wanaagsan loogu diyaariyo ururka caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla. (Ver)
20-07-2021 - Horumarka xorriyadda: Dib u eegis lagu sameeyay taariikhda FSF: Maanta waxaan soo bandhignay bogga jadwalka taariikhda FSF oo muujinaya aragti guud oo ku saabsan heerarka uu soo maray ururka, sida markii la sii daayay GPLv3, ama markii uu dhacay shirkii ugu horreeyay ee LibrePlanet. Dhammaan bogaggan waxay leeyihiin xiriiriyeyaal kaa sii geyn doona godka bakaylaha si aad u kordhiso aqoontaada shaqada taariikheed ee FSF iyo dhaqdhaqaaqa software-ka bilaashka ah guud ahaan. (Ver)
Si aad wax badan uga ogaato mid kasta oo ka mid ah wararkan iyo kuwa kale, dhagsii waxyaabaha soo socda isku xirka.
Wararkii ugu dambeeyay ee Hindisaha Isha Furan (OSI)
09-07-2021 - Macluumaadka Wax ku oolka ah ee Isha Furan (POSI): Macluumaadkayaga CFP ee Macluumaadka Furan ee Furan (POSI) wuxuu furan yahay bil waxaanan qorsheyneynaa dhacdo hal-maalin ah, oo nus-maalin ah oo lagu beegsanayo ururrada iyo shakhsiyaadka inta badan laga iloobo barnaamijyada bulshada iyo raadinta macluumaadka ku saabsan isticmaalka isha furan macnaheedu waa ficil ahaan, laga bilaabo gacanta kuwa ku hadla oo khibrad ballaaran u leh duurka. (Ver)
23-06-2021 - Maxay Copilot uga dhigan tahay il furan?Qof kastaa wuxuu ka hadlay GitHub qalabkii dhawaan lagu dhawaaqay ee Copilot, oo ah kaaliye cusub oo AI ku shaqeeya. Marka waxaan ku bilownay inaan isweydiino, "Qalabkani ma shabakad fiican ayuu u yahay bulshada isha furan?" Jawaabtu waa "Malaha", laakiin leh digtooni yar. Marka lagu daro bulshadeeda ballaaran ee wax ku biiriyaasha wax ku oolka ah (qaar badan oo ka mid ah ma sheegaan wax shati ah, waxbadan oo ka yar liisanka ilaha furan), GitHub waxay siyaabo badan u noqotay meesha ugu dambeysa ee ay ka wada shaqeeyaan bulshooyinka il furan. Jagadaas gaarka ahi waxay qaadaysaa mas'uuliyad soo jireen ah. (Ver)
Wararkii ugu dambeeyay ee Linux Foundation Organization (FL)
Dhacdo cusub ayaa diiradda lagu saaray abuuritaanka amniga internetka ee silsiladda bixinta barnaamijka lagu dhawaaqay: Waxaan ku faraxsanahay inaan bulshada u soo bandhigno dhacdo cusub oo dadku si toos ah wax uga baran karaan khubarada ka shaqeyneysay xallinta nuglaantaan muddo ku dhow toban sano, si loo ogaado sida ugu wanaagsan ee loo ilaalin karo silsiladdooda iyo yareynta aafada ka dhalan karta. (Ver)
Linux Foundation - Networking (LFN) waxay ku dareysaa xubno cusub oo ku saabsan ganacsiga iyo nidaamka deegaanka si ay u taageeraan furitaanka 5G super naqshad naqshadeynta: LFN oo fududeyneysa wada shaqeynta iyo howlkarnimada heer sare ee mashaariicda isku xirka isha furan ayaa maanta shaaca ka qaaday in toddobo urur oo cusub oo xubin ka ah ay ku soo biireen bulshada si ay uga wada shaqeeyaan 5G Super Blue Print initiative. (Ver)
Si aad wax badan uga ogaato mid kasta oo ka mid ah wararkan iyo in ka badan, dhagsii waxyaabaha soo socda links: blog, Wararka mashruuca y War-saxaafadeed.
Marka la soo koobo, waxaan rajeyneynaa taas tan "yar oo waxtar leh isugeynta wararka " leh waxyaabaha ugu muhiimsan gudaha iyo dibedda baloogga «DesdeLinux» loogu talagalay bisha «julio» laga bilaabo sanadka 2021, aad u anfacdaa guud ahaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo gacan weyn ka geysatey hagaajinta, koritaanka iyo baahinta nidaamka deegaanka ee codsiyada la heli karo «GNU/Linux».
Hadana haddii aad jeceshahay daabicadan, ha joojin la wadaagida dadka kale websaydhka aad jeceshahay, kanaalka, kooxaha ama bulshada shabakadaha bulshada ama nidaamyada farriimaha. Ugu dambayn, booqo boggayaga guriga ee «Laga soo bilaabo Linux» si aad u sahamiso warar dheeraad ah, uguna biirto kanaalkayaga rasmiga ah ee Telegram ka FromLinux.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Julaay 2021: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah
Glibc waxay joojiyeen wareejinta khasabka ah ee xuquuqda koodh ee FSF
Waxaa la helay diidmo u nuglaanta adeegga ee saameeya nidaamka